Andro: 9 Novambra 2019
Ny tapakila tapakila Marmaray sy ny Expedition Marmaray: Ny fananganana ny tetikasa Marmaray, izay hampifandray ny lalamby eo amin'ny andaniny roa amin'ny Bosporus, dia mitohy haingana. Ny lalamby lalamby dia mandalo eo ambanin'ny Bosporus [More ...]
Ny tapakila tapakila Lakes Express: tsipika Isparta- Izmir (Basmane), izay hiasa isan'andro, ny Lakes Express dia misy sarety 262 fakan'ny mpandeha 4. Ny sidina Isparta Izmir dia nanomboka tamin'ny Oktobra 25 2019 [More ...]
Ny vidin'ny tapakila sy ny lalan'ny tapakila Adana Metro: Toeram-panobiana tranobe misy ny faritra 150 hektar ka misy ny trano fitantanana foibe, atrikasa fikojakojana ary trano sy fitaovana hafa mpanampy. [More ...]
Ao amin'ny 2012, miaraka amin'ny Lalàna No. 6360, ny faritry ny faritra mifanila dia nitarina ary ny isan'ny distrika ao amin'ny faritra mifanila dia nitombo hatramin'ny 16 ka 25. Na dia nitombo 2013 teo anelanelan'ny 2018-9 taona aza ny mponina ao amin'ny faritany Ankara, bus EGO [More ...]
Ny filoha Aktaş Kahraman dia nanome ny mpamily; Ben'ny tanànan'i Bursa Alinur Aktaş, raha teo anaty fiara fitaterana ny mpandeha rehetra nandona ny hatsiaka mba hivezivezy milamina, nandalo teo anoloana loza mety hitranga [More ...]
Ho amin'ny fijerin'ny mpifaninana voatendry amin'ny TCDD Taşımacılık A.Ş. Ireo antontan-taratasy takiana amin'ireo kandidà izay voatendry am-pahatsorana ho amin'ny toeran'ny TCDD Taşımacılık A.Ş. [More ...]
TCDD Transport dia nanao sonia ny Protocol for Transports on Trans-Caspian Route; Nandritra ny lanonana fandefasana ny Railway Express, ny fiaran-dalamby voalohany izay hiainga avy any China ho any Eropa mampiasa an'i Marmaray, “Generation iray [More ...]
Nakatona ny vavahadin'ny fahafatesana any amin'ny Distrikan'i Ceyhan ao Adana; Ceyhan distrikan'i Adana tamin'ny herinandro lasa, izay mpilalao baolina kitra amam-boninahitra iray sy ilay vehivavy maty nodiavina namakivaky ny lalamby dia nahafantatra fa ilay vehivavy. Ny herinandro lasa teo tany amin'ny distrikan'i Canaana Adana [More ...]
Any Samsun, indrindra eo amin'ny làlan'ny làlan-dalambe sy boulevard, ny mpamily, ny fampiharana tselatra maintso ho an'ny fampitandremana mba hampitsahatra ny jiro mena dia natsahatra ny famaranana 'FARANY FAHAFATESANA' GREEN FLASH '! Sampan-draharahan'ny Fitaterana ao Samsun Metropolitan [More ...]
Ny kaominin'i Mersin Metropolitan dia nanomboka niasa tamin'ny Mersin Landscape Master Plan izay voalohany amin'ny tantaran'ny tanàna. Nanomboka teo ambany fitarihan'ny Ben'ny tanànan'i Mersin Metropolitan Vahap Seçer ny asa ary nomanina amin'ny alàlan'ny fijerena ny dinam-paritany an-tanàn-dehibe. Metropolitan [More ...]
Nahatratra 50 tapitrisa ny isan'ireo mpandeha nentin'ny fiara tany İzmir. Karşıyaka ary ny lalan'ny Konak dia tonga tamin'ny mpandeha 120 arivo isan'andro. Isan'ny mpandeha nentin'ny kamiao, iray amin'ireo andry lehibe fitateram-bahoaka any İzmir [More ...]
Izmir Denizli Fiara tapakila tapakila: Izmir Basmane Denizli fiaran-dalamby dia fiaran-dalamby fiasan'ny TCDD fitateram-bahoaka amin'ny sisin-dalamby TCDD eo anelanelan'ny gara Basmane sy Railway. Teo anelanelan'i Izmir sy Denizli [More ...]
Tale jeneralin'ny Ivotoeram-piaramanidina airports (DHMI), taona 2019 tamin'ny volana oktobra ny antontan'isan'ny fiaramanidina, mpandeha mpandeha ary mitondra entana. Araka izany, tamin'ny Oktobra; isan'ny zotra fiaramanidina ary mandeha eny amin'ny seranam-piaramanidina [More ...]
Ny Tale Jeneralin'ny IETT sy LÖSEV dia nikarakara seminera momba ny fiarahana amin'ny alàlan'ny Herinandron'ny Leukemia "momba ny leukemia. Ankoatr'izay, ny mpitantana sy ny mpiasa manao saron-tava dia nanome hafatra fahatsiarovan-tena. Ny leukemia dia fitsaboana fisorohana sy aretina azo ampiasaina. [More ...]
Fanasana avy amin'ny Tale jeneralin'ny EGO mankany amin'ny Oniversite-Mpanao Universite miaraka amin'ny Passion Bus; Sakarya University Civil Engineering 4, izay milaza fa nandany ampahany tamin'ny fiainany tany Ankara izy ary izy dia mpankafy Ankara. mpianatra antitra Enes Ekizer, [More ...]
EGO General Manager Alkaş Nitsidika ny Foiben'ny Psycho-Technical EG Manager General Nihat Alkaş no lehiben'ny sampan-draharahan'ny fitantanana Bus ary ampanaovina ireo mpandeha bus ary manao fizahana aretin-tsaina. Mitsidika ny biraon'ny sampana faritra [More ...]
Kütahya Tile Festival amin'ny Alsancak Station; Tao anatin'ny faritry ny asa tanana ESCO sy ny Folk Art ında ao amin'ny tambajotran'ireo tanàna mamorona UNESCO, Kütahya Tile Festival dia natao tao amin'ny Station Alsancak any İzmir. Miaraka amin'ity hetsika ity, ny tantaran'i Kütahya, ny kolontsaina ary [More ...]
Fiampitana ambaratonga mankany Dumlupınar; Ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD) 7. Ny talem-paritra Adem Sivri sy ny delegasiona dia nitsidika ny Governemanta Abdulkerem Abbasoğlu tao amin'ny biraony. Ny ben'ny tanàna ao amin'ny Distrika Şemsettin Akağaç'ın dia nahitana ihany koa [More ...]
Fiofanana vaovao Patriots vaovao ao amin'ny ESTRAM; Miaraka amin'ireo mpandeha an'arivony isan-andro, nanomboka ny fiofanana amin'ny tia tanindrazana vaovao ao ESTRAM, izay ampahany lehibe amin'ny fitateram-bahoaka any Eskişehir. Talohan'ny dinidinika natao tamin'ny İŞKUR [More ...]
Torkia Wagon Industry Inc. (TÜVASAŞ) no notendrena ho amin'ny lefitra Tale Jeneraly Ali Kozallık. TÜVASAŞ dia nanao fanambaràna fa ny fanendrena vaovao no tao amin'ny andrim-panjakana, raha i Kozallik, izay niasa taloha [More ...]